Ny karamanay aza tsy hiakatra mihitsy | Hevitra MPANOHARIANA
misy filazan'ny voanjo hoe "l'homme est un eternel insatisfait", izany hoe tsy mba mety faly @ izay ananany mintsy ny olona.
Tsapandrizareo ihany hoe zarany aza nahazo 10% nge fa io le hoe mba mimenomenona kely e, sao d mba mahazo mihoatra :)
za sy dotmg efa nanao resaka lava be tatsy ambadika tatsy fa hoy aho hoe mitombona doly na ilay 8% na ilay 10% fa ny mihoatra an'zay aloha dia ho nofinofy ihany e.
D mba otrin lesy zany zao ny tariff an'ny JIRAMA? tiako fantatra fotsiny :)
Nampidirin'i simp @ 13:15, 2008-01-10 [Valio]
Andraso hojereko indray ny faktiora fa any an-trano no misy azy e!
Nampidirin'i jentilisa @ 16:11, 2008-01-10 [Valio]
Ny vidin-jiro moa dia mizara roa, fandaniana voalohany sy fandaniana faharoa. Ny fandaniana voalohany satria tarif 14 ny ahy dia hatramin'ny tondron'ny mpanisa 25 ka izay mihoatra ny 25 dia lasan'ny fandaniana faharoa. Ny voalohany izany dia 126 ariary lasa 140 ariary ny 1kWh. Ny fandaniana faharoa kosa izay 525 ariary dia lasa 605 ariary ny 1kWh. Ity faharoa ity no mahavetivety avo roa na telo heny ny vola aloanao satria efa ety dia ety izany fandaniana 25kWh izany Ny resaka rano moa dia 310 ariary no mm
Nampidirin'i jentilisa @ 07:11, 2008-01-11 [Valio]